Penzura yevana Inoronga Pot | Mhizha On
Tony Torres | | Mhizha yevana
Vana vanowanzounganidza huwandu hwakawanda hwependi, mamaki, uye penzura. Icho chinhu chakakura nekuti zvinoreva kuti ivo vanogona kuvandudza kugona kwavo nezvinhu zvakawanda. Mazhinji emapenduru anowanzo kupera muzviitiko kana mabhokisi, asi vana vese vane mamwe mapendi avanoshandisa kupfuura mamwe.
Kune avo, kune avo vanoda kuve nezvakawanda paruoko, hapana chinhu chiri nani pane kuita penzura poda kurongedza seizvi zvinonakidza kwazvo zvandinokuunzira nhasi. Kudzorerazve zvinhu zvauinazvo kumba, kuchengetedza ice cream inonamira muzhizha rino kana kuzvitenga iwo nemutengo wakachipa kwazvo mune chero bazaar. Chinhu chakakosha ndechekuti vana vafare uye kana vakawanawo kuronga kwedhesiki rako, zviri nani zvikuru.
1 Desk Penzura Murongi
Desk Penzura Murongi
Chekutanga pane zvese kubata zvimwe zvinhu, yakapusa chaizvo seinotevera:
2 makadhibhokisi rolls yemapepa echimbuzi
Tsvimbo dzePopsicle of colors
Adhesive tepi zvakapetwa kaviri
Kutanga isu tichaenda kujoina iwo mairi rolls emuchimbuzi mapepa. Kuti tiite izvi, tinogona kushandisa masking tepi kana mamwe machira atinozonama neanamatira.
Kana tangova nemataipi akasungirirwa, isu ticha gadzira base nekadhibhodhi. Isu tinoisa mipumburu uye nepenzura tinodhira hwaro. Cheka nekasi uye isa pachigadziko ne masking tepi, uchizvichengetedza zvakanaka kuti zviite zvinopesana.
Iye zvino tava kuzoisa mitsetse miviri yeakaviri mativi tepi, imwe pasi uye imwe kumusoro. Tinobvisa bepa rinodzivirira uye tinotanga namatira popsicle inonamira kwese pamusoro. Zvakakosha kuti matanda ese akaenzana.
Isu tinoisa zvimiti pamusoro pese, inofanira kunge iri seinotevera.
Kuti tipedze, isu tichagadzira chigaro chekwere. Tinodhirowa mativi pane kadhibhodi anenge gumi ne10 masentimita.
Isu tinocheka ndokuisa mativi maviri etepi maviri-mativi anonamira.
Iye zvino isu tinongofanirwa kunamatira tumiti twu ice cream, kuyedza ayo akaiswa pakukwirira kumwe chete.
Kuti tipedze, isu tinongofanira isa chidimbu chetipi-mativi tepi pamusoro pechigadziko yemakadhibhokisi roll. Tinobvisa bepa rinodzivirira uye kunama pane hwaro.
Uye ndizvozvo, isu tine yakanaka uye inoshanda murongi bhodhoro emapenzura edhesiki revana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Mhizha yevana » Penzura yevarongi yehari yevana
Matanidza XNUMX nemhuka